UFC လိုက်ဝိတ်တန်းမှာ မရှုံးသေးတဲ့ ခါဘီ နဲ့ ကော်နာ မက်ဂရီကော်တို့ မကျေပွဲ ပြန်ထိုးဖွယ်ရှိနေ
UFC လိုက်ဝိတ်တန်းမှာ မရှုံးသေးတဲ့ ခါဘီ နဲ့ ကော်နာ...
8 ก.ย. 2562 - 21:55 น.
စိန်ခေါ်သူ ဒပ်စတန်ကို တတိယအချီမှာ အနိုင်ရခဲ့ ခါဘီ
မနေ့ညက အဘူဒါဘီမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ UFC စိန်ခေါ်ပွဲတစ်ခုမှာတော့ လက်ရှိ UFC မှာ ရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့ ရုရှားက ချန်ပီယံ ခါဘီက စိန်ခေါ်သူ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဒပ်စတန် ပေါ်ရီယေကို ဒိုင်ပွဲရပ်နဲ့ အနိုင်ယူပြီး လိုက်ဝိတ်တန်း ချန်ပီယံဆုကို ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၃ဝနှစ် အရွယ်ရှိ ခါဘီဟာ ၂၈ပွဲဆက်တိုက် အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပွဲအတွင်း တတိယအချီ ၂မိနစ်၊ ၁၆စက္ကန့်မှာ ဒိုင်ပွဲရပ်နဲ့ နိုင်ခဲ့တာပါ။
စိန်ခေါ်ယူ ဒပ်စတန် ပေါ်ရီယေဟာ ခါဘီကို ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် အသတ်အပုတ် ကျွမ်းကျင်းတဲ့ ခါဘီရဲ့ ဖိအားပေးမှုတွေကို ဘယ်လိုမှ ခုခံနိုင်ခြင်း မရှိဘဲ အရှုံးပေးခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခါဘီဟာ အိုင်ယာလန်က နာမည်ကျော်ဟောင်း ကော်နာ မက်ဂရီကော် နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ထိုးသတ်ခဲ့ပြီးနောက် ပွဲအပြီးမှာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ်တွေကြောင့် ၉လ ပွဲပယ် ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံထားရတာဖြစ်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်လာတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။
UFC ရဲ့ လိုက်ဝိတ်တန်း ချန်ပီယံဘွဲ့ကို ရပြီးကတည်းက ၃ကြိမ်မြေက် ချန်ပီယံဘွဲ့ကို ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အငြင်းပွားဖွယ်မရှိ ချန်ပီယံဖြစ်နေတာပါ။ လိုက်ဝိတ်ချန်ပီယံ ခါဘီဟာ ဆုကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၆သန်းကျော် ရခဲ့ပြီး ရှုံးနိမ့်သူ ဒပ်စတန် ပေါ်ရီယေက ဒေါ်လာ ၁သန်း ကျော်ရခဲ့ပါတယ်။ နာမည်ကျော် လက်ဝှေ့ကျော် မေဝဲသာနဲ့ ခါဘီတို့ကို ၂ပွဲဆက်တိုက် ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ကော်နာ မက်ဂရီကော်ကတော့ UFC ကို ပြန်လာမှာ ဖြစ်ပြီး ခါဘီနဲ့ မကျေပွဲ ပြန်လည်ထိုးသတ်ဖို့ စိန်ခေါ်ထားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၈ပွဲဆက်တိုက် ရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့ ခါဘီ
ခါဘီ UFC မှတ်တမ်း
ပွဲ - ၂၈ပွဲ
နိုင်ပွဲ - ၂၈ပွဲ
ခါဘီနဲ့ မက်ဂရီကော်တို့ မကျေပွဲ ပြန်ထိုးမလား
မက်ဂရီကော် UFC မှတ်တမ်း
ပွဲ - ၂၅ပွဲ
နိုင်ပွဲ - ၂၁ပွဲနိုင်
ရှုံးပွဲ - ၄ပွဲရှုံး
ဒပ်စတန် ပေါ်ရီယေ UFC မှတ်တမ်း
ပွဲ - ၃၂ပွဲ
ရှုံးပွဲ - ၆ပွဲ
อัลบั้มภาพ UFC လိုက်ဝိတ်တန်းမှာ မရှုံးသေးတဲ့ ခါဘီ နဲ့ ကော်နာ မက်ဂရီကော်တို့ မကျေပွဲ ပြန်ထိုးဖွယ်ရှိနေ